ချစ်မယား – Grab Love Story
ကျုပ်ကလင်းထင်ပါ။ ကုပဏ္ဏီတစ်ခုရဲ့အရောင်း ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့။ ကျွန်တော့်မိန်းမက နွယ် တဲ့။ ချစ်ရကောင်းတယ်သူက။ ကျုပ်မှာ ငယ်စဉ်ကတည်းကပေါင်းလာတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရှိတယ် ဝေဖြိုးတဲ့။ သူနဲ့ကျုပ်နဲ့က ဆိုးဖော်ဆိုးဖက်တွေ။ဒီကောင်ကမိန်းမ မရသေးဘူး။ ရမယ့်ပုံလည်းမရှိပါဘူး အရက်သမားကိုး။ ရုပ်ကလည်းဆိုးတဲ့အထဲပါတယ်ဗျ။ သူနဲ့ကျုပ်နဲ့က ကျောင်းမှာကတည်းကသောက်ဖော်သောက်ဖက် တွေ။ ကျုပ်ကတော့အရက်ကြိုက်တဲ့အထဲမပါဘူး။ သူကတော့အရက်သမားကိုဖြစ်နေတာ။ ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်က ကျောင်းတက်စဉ်ကတည်းက အရက်လေးသွားသောက်လိုက်၊ ဖာလေးချလိုက်နဲ့တော်တော်ဆိုးခဲ့တာ။ ကျုပ်လီးက သေးတယ်၊ ဖာချရတာအဆင်မပြေဘူး။ လှိုင်ခေါင်းထဲ ကြွက်ဝင်သလိုပဲဗျ။ ဝေဖြိုးကတော့ လီးတော်တော်ကြီးတဲ့ကောင်ဗျ။ အရှည် ၇ လက်မကျော်ပြီး တုတ်လည်းတုတ်တယ်။ ကျုပ်ကတော့ ငါးလက်မလောက်ရှည်ပြီး မတုတ် ဘူး။
ထားပါတော့…ကျောင်းပြီးလို့လုပ်ငန်းခွင် ထဲကို ကျုပ်ကရောက်တယ်။ ဒီကောင်ကတော့ ခုထိဝေလေလေပဲ။ ကျုပ်မိန်းမရတော့ ဒီကောင်လာတယ်။ နောက်ပိုင်းကျုပ်တို့လင်မယားအိမ်ခွဲ နေလိုက်တော့ အရမ်းဝေးလို့ ဒီကောင် တစ်လမှ တစ်ခေါက်လောက်ပဲ ကျုပ်အိမ်ကိုလာလည်တော့တယ်။ လာတိုင်းလည်း သောက်လာတာ ပဲ။ ပြီးရင် ကျုပ်မိန်းမကို ငမ်းတော့တာ။ ကျုပ်မိန်းမ က သေးသေးလေးပါ၊ အရပ်ရှည်တယ်၊ အသား လတ်တယ်၊ ကြည့်ကောင်းရုံပဲ။ ဖင်ကတော့ ကားပြီးသေးတယ်၊ နို့လေးတွေကလည်း တစ်ကိုင်စာ ပါပဲ။ ကျုပ်မှာ မိန်းမကိုလိုးရတာအားမရဘူးဗျ။ လီးကသေးတော့အဆင်မပြေဘူး။ ဒါပေမယ့် ကလေးတစ်ယောက်တော့ထွက်လာတယ်။ မိန်း မစောက်ဖုတ်ကလည်း ကျုပ်နဲ့မရခင်ကတည်းက ပြဲနေတာနဲ့တူပါတယ်။ အပျိုဆိုရင် ကျုပ်လီးနဲ့လိုးရင်ကြပ်မှာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် စပြီးလိုးကတည်း က ချောင်နေတာ။ ကြည့်ရတာ လီးကြီးတဲ့ကောင်နဲ့ အကြိမ်ရေများစွာခံဖူးသလား၊ ဒါမှမဟုတ် သုံး လေးယောက်လောက်နဲ့များခံဖူးသလားမသိပါဘူးဗျာ။ သေချာတာကတော့ လီးကြီးကြီးနဲ့အလိုးခံဖူးတာသေချာတယ်။
ကျုပ် နွယ် ကိုလိုးတဲ့အခါတိုင်း သူခမျာ့ ချစ်လို့သာသည်းခံတဲ့ပုံဗျ၊ ဒါပေမယ့်ကြေနပ်လောက်တဲ့အထိတော့ တစ်ကြိမ်မှမရဖူးလောက် ဘူး။ ကျုပ်လည်း ရကတည်းက နေ့ကော ညကောလိုးတာပဲ အချိန်တန်ရင်ကျုပ်ကပြီးပြီး သူ ကတော့ ပီးတယ်လို့တစ်ကြိမ်မှမရှိဘူး။ အိမ်ထောင်သက် သုံးနှစ်အတွင်းမှာပေါ့။ ကလေးလည်းရပြီ ခုထိသူ့ကိုကျေနပ်အောင်လိုးမပေးနိုင် ခဲ့ဖူး။ အဲဒီတော့ ကျုပ်စဉ်းစားတယ်။ နဂိုကတည်းက လီးသေးပေမယ့် ထန်တဲ့ကောင်ဆို တော့ သူ့ကိုအခြားလီးကြီးတဲ့ကောင်နဲ့ ပေးလိုး ချင်တယ်လေ။ အဲဒီတော့ သူ့ကိုလိုးရင်း အဲဒီ အကြောင်းပြောပြတော့ သူငြင်းတယ်ဗျ။ ကျုပ် လည်းနေ့တိုင်း ပြောပါဗျားလာတော့ နောက်ဆုံး သူက ကတိတောင်းတယ်။ သူ့ကိုအချစ်မလျော့ရ ဘူးဆိူပြီးပေါ့။ ကျုပ်လည်းကတိပေးလိူက်တာ ပေါ့၊ ဘယ်တော့မှအချစ်မလျော့ပါဘူးဆိုပြီး။ အဲဒါနဲ့ကျုပ်လည်းစဉ်းစားတယ် လိုင်းပေါ်မှာ gp တွေထဲကို အကောင့်တုနဲ့ဝင်ချိတ်ရင်ကောင်းမလားပေါ့။ ဒါပေမယ့်အခြားသူဆိုတာ ယုံကြည် ဖို့ခက်တယ်လေ။ ကျုပ်လိုင်းပေါ်မှာ ပို့စ်တင်ပြီး လီးပုံတွေတောင်းကြည့်လိုက်တော့ ကျုပ်ထက်တော့ ကြီးကြပါတယ်။ ကျုပ်စိတ်ကြိုက်မဟုတ် သေးဘူး။ အချိန်တော်ကြာ ကျုပ်စောင့်ကြည့် တယ်။ ပေါ်မလာဘူး၊ အဲဒါနဲ့စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေတုန်း ဝေဖြိုးရောက်ချလာတယ်။ သူ့လက် ထဲမှာလည်း ဘီယာပုလင်းတွေဆွဲလာတယ်။
….ဟေ့ကောင် ဝေဖြိုး..မင်းမလာစဖူးအလာထူး လို့ပါလားကွ..လက်ထဲမှာလည်း ဘီယာပုလင်း တွေနဲ့ပါလား…။
……အေးကွာ ငလင်းရ ငါစိတ်ညစ်လို့ပါကွာ…။
……အေး…ဘယ်လိုဖြစ်လို့တုန်း ငါ့ကိုပြောလေ ကွာ။
…….အိမ်ထဲမှာပေါ့ကွ။ ကျုပ်လည်း နွယ်ရေနွယ်ရေဆိုပြီး လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။
….ရှင်…ကိုကို…လာပြီလာပြီ။ ဆိုပြီး နွယ် အပြေး တပိုင်းနဲ့ထွက်လာတယ်။ နွယ်ထွက်လာတော့ ဟို သကောင့်သားက မျက်လုံးကျွတ်မတက်ငမ်းတယ်…။ ပြီးတော့ ကျုပ်လည်း နွယ့်ကိုအမြည်း လေးစီစဉ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ကျုပ်လည်းအကြံရ သွားတာပေါ့။ ဟုတ်တယ်လေ ဒီကောင့်လီးက အကြီးကြီးလေ နွယ့်ကို လိုးခိုင်းရင် ရမှာပဲ။ ဒီကောင်လည်း နွယ်ကိုကြည့်တဲ့အကြည့်တွေက လိုးချင်နေတာသိသာတယ်။ အဲဒါနဲ့သောက်ပြီးမှ စကားစမယ်ဆိုပြီး နှစ်ယောက်သား သောက်ကြတာပေါ့။
…အေးပါ ငါ့အိမ်ကကွာ ငါ့ကိုနေ့တိုင်းမောင်းချ နေလို့ဟေ့….။
…..ဟ..ဟေ့ကောင်ရ မောင်းချမှာပေါ့ကွ မင်းဒီအရွယ်ရောက်နေပြီ အလုပ်မရှိအကိုင်မရှိနဲ့ကိုး ဟ…။
…….ငါလည်းရှာတာပဲလေကွာ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူကမှ အရက်သမားငါ့ကိုမခန့်ချင်ဘူးလေ။ သူခမျာပြောရင်းဆိုရင်းသောက်တာ ဘီယာနဲ့ ရွှေ အပိုင်းပြားလေးကိုရောသောက်တော့ မြန်မြန် တက်တာပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်တစ်လုံးမကုန်သေးဘူး အရက်နဲ့ရောသောက်တဲ့ကောင်က နောက်တစ်လုံး စဖွင့်သောက်နေပြီ။ နွယ်ကအမြည်းလာ ချပေးတော့ ငမ်းလိုက်သေးတာ။
….ကိုကိုရေ…နွယ် ကလေးသိပ်ရင်းခဏအိပ်လ်ုက်ဦးမယ်နော် နဲနဲပင်ပမ်းနေလို့…။
နွယ်ထွက်သွားတော့ ဟိုကောင်က ဖင်ကို လိုက်ကြည့်နေလေရဲ့။ ကျုပ်လည်း….
…..ဟေ့ကောင် ငဖြိုး မင်းမိန်းမ မယူတော့ဘူးလားဟ။
…..ယူချင်တာပေါ့ကွာ ငါ့လိုကောင်ကို ဘယ်မိန်းမကကြိုက်မှာတုန်း…။
…..အေးပါသူငယ်ချင်းရာ…ခုနောက်ပိုင်း မင်းဖာ ချဖြစ်သေးလား….။
……ဟင့်အင် မင်းမိန်းမယူပြီးနောက်ပိုင်း ငါလည်းအလုပ်မရှိတော့ငွေမရှိဘူးလေ ဟိုးတုန်း ကတောင် မင်းစိုက်ပေးလို့ ငါချဖြစ်တာ၊ အခုတော့ မချဖြစ်တော့ပါဘူးကွာ….။
…..အော်အေးပါအေးပါ။ ကျုပ်တို့လည်း ဆက်ပြီးသောက်ကြတာပေါ့။ အချိန်တော်တော်လေးကြာတော့ နှစ်ယောက်သား မူးလာကြပြီလေ။ ဒီကောင်က သေးသွားပေါက်ဦးမယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားလေရဲ့။ ကျုပ်လည်းလက်ကျန်လေးဖြတ်ရင်း စောင့်နေတာ တော်တော်နဲ့ပေါ်မလာတော့ ကိုပ်လည်းဒီကောင့်နောက်ကိုလိုက်ချောင်းကြည့် တယ်။ အမ်မယ် သကောင့်သားက ကျုပ်တို့ အိပ်ခန်းရှေ့မှာ အခန်းထဲကြည့်ပြီးဂွင်းထုနေလေ ရဲ့။ ကျုပ်လည်း ဧည့်ခန်းကိူပြန်သွားပြီး ငဖြိူးရေ ငဖြိုးဆိုပြီး လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။
…..ဒီကောင်က ရောက်ချလာပြီး ဘာတုန်းဟတဲ့ ကျုပ်ကိုပြန်မေးတယ်။
….မင်းသွားတာကြာနေလို့ဟ ဘီယာတွေပူကုန် လိမ့်မယ်၊ တစ်လုံးစီပဲကျန်တော့တာ သောက်လိုက်ကြအောင်…ချီးယား…
….အေးကွာ…ချီးယား…ဆိုပြီးနှစ်ယောက်သား သောက်လိုက်ကြတယ်။ တစ်ဝက်လောက်ကုန်တော့……
ကျုပ်လည်းသေးပေါက်ပြီး ကျုပ်တို့အခန်းရှေ့ ရောက်တော့ အခန်းထဲဝင်လိုက်တယ်။ နွယ် လေးအိပ်နေတာ ထဘီကပေါင်ထိလန်နေတာကိုး။ ဘေးတိုက်လေးစောင်းပြီးအိပ်နေတော့ ထဘီကြားက စောက်ဖုတ်ရေးရေးလေးမြင်နေ ရတယ်။ ဒါကိုကြည့်ပြီးဟိုကောင်ထုတာနေမယ်။ ကျုပ်လည်း နွယ့်နားသွားပြီး သူ့ကိုလှုပ်နှိုးလိုက်တယ်။ သူနိုးလာတော့ ကျုပ်က ဝေဖြိုးနဲ့လိုးဖို့ ပြောပြတယ်။ သူကအင်တင်တင်ပါပဲ ဝေဖြိုးနဲ့ လိုးရမယ်ဆိုတော့လေ။ ဒါပေမယ့်ကျုပ်ကိုကတိ ကလည်းပေးထါးတော့ မငြင်းပါဘူး လက်ခံပေး တယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျုပ်ခေါ်ရင်အပြင်ထွက်ခဲ့ဖို့မှာ ပြီးကျုပ်လည်းဧည့်ခန်းပြန်လာခဲ့တယ်။ ဧည့်ခနရောက်တော့ ငဖြိုးက ဘီယာတောင်ကုန်ခါနီးပြီ တော်တော်လည်းမှန်နေပြီ ဒီကောင်။ အဲဒါနဲ့ ကျုပ်လည်း လက်ကျန်လေးဖြတ်ပြီး စကားစလိုက်တယ်။
….ချချင်တာပေါ့ကွာ ဘယ်ပြောကောင်းမလည်း။ အခုသွားချမလား။
…..ဟာ ဘယ်ကိုသွားချမှာတုန်း မင်းကလည်း။
….ဖာသွားချမယ်လေကွာ မင်းစိုက်ပေးပေါ့၊ ငါတော့ဘီယာဝယ်ခဲ့တာကုန်ပြီ….။
……အေးမင်းချရမယ် ဒါပေမယ့် ဖာတော့မဟုတ် ဘူး အသန့်လေး….ချမလား…။
…..အင်း ချမယ်ကွာ ငါငတ်နေတာကြာပြီ…မင်းခေါ်လိုက်လေ သူကဘယ်မှာတုန်း….။
…အေးပါအေးပါ.. နွယ်ရေ နွယ်..လာပါဦး ဆိုပြီး ကျုပ်နွယ်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ ဒီကောင်မျက်လုံးကြီးပြူးပြီး အံသြသွားတာပေါ့။
…..လာပြီ ကိုကိုရေ ဆိုပြီးမိန်းမထွက်လာတယ်။ ကျုပ်ကြိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ဘော်လီကော၊ အောက်ခံကောဝတ်မထားဘူး။
……ကဲ ငဖြိုး မင်းချရမယ့်ဆော်ရောက်လာပြီလေ..စိတ်ကြိုက်ချကွာ ဒီနေရာမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဖာချသလိုတော့ အကြမ်းကြီးမချနဲ့နော် ဖြေးဖြေးလုပ်။.
……ဟာ….ငလင်း မင်းဟာကသေကောသေချာရဲ့ လားကွာ….။.
…..သေချာတာပေါ့ကွာ ကြာတယ်ကွာ ငါစိတ်မ ပြောင်းခင် လိုးတော့။
……အေး…အေး..အေးပါကွာ။ မိန်းမကိုသူ့အနား ခေါ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ပေါင်ပေါ်ကိုမျက်နှာ ခြင်းဆိုင် ထိုင်ခိုင်းပြီး နွယ်ကိုကစ်ဆင်ဆွဲတယ်ဗျ။ ကစ်ဆွဲရင်း သူ့ပေါင်ပေါ်ထိုင်နေတဲ့မိန်းမဖင် တွေကို လက်ကြမ်းကြမ်းကြီးနဲ့ဆုတ်နယ်နေတာ။ ဖင်ကိုနယ်လိုက် နို့တွေကို အကျီအောက်က လက်လျိုပြီးပယ်ပယ်နယ်နယ်ကိုင်လိုက်လုပ်နေတာ။ မိန်းမက အစကအင်တင်တင်ပါ နောက်တော့ သူလည်းဖီးတက်ပြီး ပြန်နမ်းတော့တာပဲ။ ဟိုကောင်က နမ်းလည်းပြီးရော မိန်းမရဲ့အဝတ်တွေ အကုန် ချွတ်ချလိုက်တယ်။ သူလည်းချွတ်တယ်။ လီးကြီးကဖြောင်းဆိုထွက်ချလာတော့ မိန်းမခမျာ့ မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ ကျုပ်လည်းမျက်လုံး ပြူးတာပေါ့ လီးမှာ ဂေါ်လီတွေပတ်ပတ်လည် ထည့်ထားတာကိုး…။ နှစ်ယောက်သားကြမ်းပြင်ပေါ် ဆင်းလိုက်ကြပြီး မိန်းမကိုလီးစုပ်ခိုင်းတယ်။ သူကလည်း မိန်းမစောက်ဖုတ်ကို ယတ်ပေးတယ်ဗျ။ အရည်တွေရွဲလာတော့ ဟိုကောင်ကမိန်းမပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီး စောက်ဖုတ်ဝကိုလီးတေ့ လိုက်တယ်….။
….ကိုဝေဖြိုး…ဖြေးဖြေးလုပ်နော် အကို့ဟာကြီးက အကြီးကြီးပဲ….။
မိနမကို နမ်းရင်း စောက်ခေါင်းထဲ လီးထည့်ချလိုက်တယ်။
..အားးးးအမလေး နာတယ် အားးးးဖြေးဖြေး
ငဖြိုးက ဖြေးဖြေးချင်းလိုးနေတယ်။ လိုးရင်း မိန်းမနို့တွေကို စို့ပေးနေလေရဲ့။
…..အား…အင့်…. အင့်…. အမလေး ကောင်းလိုက် တာ ကိုဝေဖြိုး ဆောင့်ပါ…ဆောင့်ပါ အင့်…အင့် အားးးးး။
ငလင်းရေ မင်းမိန်းမ စောက်ဖုတ်ကလိုးလို့ ကောင်းလိုက်တာကွာ တော်ရုံဆိုရင်ငါ့လီးဒဏ်မ ခံနိုင်ဘူး…မင်းနေ့တိုင်းလိုးပေးနေလို့လားမသိဘူး မင်းမိန်းမစောက်ဖုတ်က နဲနဲပဲကြပ်တယ် အားးးးရှီးးးးးကောင်းလိုက်တဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကွာ အင့်…အင့်…ရှီးးးးး။
မိန်းမက ကျုပ်ကိုအဓိပါယ်ပါပါကြည့်တယ်။ ကျုပ်သဘောပေါက်ပါတယ်။ သူတို့ ပထမအချီပြီးတော့ မိန်းမက ကျုပ်လီးကိုလာစုပ်ပေးတယ်။ ကျုပ်ကထိုင်ခုံပေါ်ထိုင်နေတာဆိုတော့ ကုန်းပြီးစုပ်တာပေါ့။ အဲဒါကို ဟိုကောင်က ချောဆီကို သူ့လီးသူသုတ် ပြီးတော့မိန်းမ ဖင်ဝ ကိုသုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ ဖင်ဝကိုလီးတေ့ပြီး ဒစ်မြုပ်ရုံသွင်းချလိုက်တယ်။ မိန်းမခမျာ့ လန့်သွားတာပေါ့ ဒစ်ကားကားကြီးက ဖင်ထဲဝင်လာ တာကိုး……
…….အ….ကိုဝေဖြိုး အခုဖင်ကိုမလုပ်ပါနဲ့ဦး ကျွန် မယောကျာ်းလီးနဲ့ ဖင်လိုးခံလိုက်ဦးမယ် အကို့လီးနဲ့ ခံရရင် ဖင်ကွဲသွားလိမ့်မယ်…နောက်တစ်ချီ ကြမှပဲ လိုးပါနော်…..။
…..အင်းပါနွယ်လေးရဲ့…..။ အဲလိုပြောပြီး မိန်းမနို့ တွေကိုကိုင်ပြီး ဖင်ထဲထည့်ထားတဲ့ ဒစ်ကိုရှေ့တိုး နောက်ဆုတ်နဲ့ အသွင်းထုတ်လုပ်နေလေရဲ့။ ခဏကြာတော့ မိန်းမက လီးစုပ်တာရပ်လိုက်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလေးဘက်ကုန်းလိုက်တယ်…..
ကျုပ်လည်း သူ့နောက်မှာ ဒူးထောက်ပြီး ဖင် ဝကိုလီးတေ့ပြီးလိုးချလိုက်တယ်။
ဝေဖြိုးကမိန်းမရှေ့သွားပြီး မိန်းမပါးစပ် နားကို လီးကြီးကပ်ပေးလိုက်တယ်။ မိန်းမကလည်း အလိုက်သင့်ပါပဲ ပါးစပ်လေးဟပြီး စုပ်တော့တာပေါ့။ ကျုပ်လည်းဖင်ကို မနားတန်းဆောင့်လိုးတော့တာပေါ်ဗျာ။ မိန်းမကဖင်ထဲမှာပဲ ပြီးခိုင်း တယ်။ ဟိုကောင်ဖင်လိုးရင် အရည်တွေနဲ့ချော အောင်လို့ပေါ့။ ကျုပ်လည်းမနားတန်းဆောင့်လိုး ပြီး မိန်းမဖင်ထဲမှာပဲ ပြီးချလိုက်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ ခုံပေါ်ကို ပြန်ထိုင်နေလိုက်တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ ဝေဖြိုးပေါင်ပေါ်မိန်းမကမျက် နှာခြင်းဆိုင်ထိုင်ရင်း နှုတ်ခမ်းချင်းဂဟေစပ်နေကြလေရဲ့။ အဲလိုလုပ်ရင်း ငဖြိုးက မိန်းမဖင်ကို မလိုက်ပြီး သူ့လက်နဲ့လီးကိုကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ် ထဲ လီးထည့်လိုက်တယ်။
စောက်ဖုတ်ထဲလီးကြီးတဆုံးစိမ်ထားပြီး နှုတ်ခမ်းခြင်းနမ်းလိုက်၊ နို့တွေစို့လိုက်နဲ့ သကောင့်သားက သာယာနေတာ။ လီးတဆုံးဝင်ပြီး ဟိုကောင်က မဆောင့်တော့ မိန်းမကသူ့ခန္ဓာကိုယ် လေးကြွကြွပြီးဆောင့်ပေးတယ်။ ဟိုကောင်က စိတ်ကြိုက်နူးနပ်လို့လည်းပြီးရော မိန်းမကို လေးဘက်ကုန်းခိုင်းလိုက်တယ်။ စောနကလီးရည်တွေ ကော၊ ချောဆီနဲ့ကော ရောနေတဲ့ဖင်ဝလေးကို သူ့လီးကြီး တေ့ချလိုက်တယ်….။
…..ဝေဖြိုးက မိန်းမရဲ့ ခါးကိုကိုင်ပြီး ဖင်ထဲဝင်နေ တဲ့လီးကို တရစ်ခြင်း ပြန်ထုတ်လိုက် ပြန်သွင်းလိုက်နဲ့ လီးအဝင်ချောအောင်လိုးနေတာ။
…အား…ရှီးးးးးး…အားးးးဆောင့် ဆောင့် တမျိုး ကြီးပဲ အားးးးးးကောင်းလိုက်တာ….လီးကြီးက ဖင်ထဲအပြည့်ပဲ အားးးးးဂေါ်လီတွေကလည်း ဖင်ကိုချိတ်ဆွဲနေသလိုပဲ…ရှီးးးးကောင်းလိုက်တာ။
…….ငဖြိုးက ဖင်ကို ဖတ်…ဖတ်.. ဖတ် နဲ့ဆောင့်လိုးနေတာ မိန်းမခမျာ အားရကျေနပ်နေလေရဲ့။ ဖင်ကိုလိုးရင်းက ပြီးချင်လာတော့ ဖင်ထဲကနေလီးကိုထုတ်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ ပြောင်းထည့် ပြီး လိုးပါလေရော။ ခဏကြာတော့နောက်တစ်ချီ ပြီးပါလေရော။ အဲဒါနဲ့ခဏအနားယူကြတယ်။ င ဖြိုးကသာ အနားယူနေတာ မိန်းမက ကျုပ်လီးကို လာစုပ်ပေးနေတယ်။ လီးစုပ်ခံရင်း ကျုပ်လည်း တစ်ချီထပ်ပြီးတာပေါ့ဗျာ။ သူလည်းနားမလို့ ငဖြိုးဘက်ကြည့်လိုက်တော့ သကောင့်သားက လွန် တယ်။ လီးကထပ်တောင်နေလေရဲ့။ ငတ်ပြတ်နေတာကိုး။ ကျုပ်လီးကိုစုပ်အပြီးရှိသေးတယ် မိန်းမလက်ကိုဆွဲပြီး သူထိုင်နေတဲ့ခုံအပေါ် မှာဘဲ မျက်နှာခြင်းဆိုင်ထိုင်ခိုင်းပြီး တောင်နေတဲ့ လီးအပေါ်မှာ မိန်းမစောက်ဖုတ်ဝကိုတေ့ခိုင်းပြီး မိန်းမကို အပေါ်ကနေဆောင့်လိုးခိုင်းတယ်။ ဒီကောင်လိုးတာနဲ့မိန်းမစောက်ဖုတ်လည်းပိုပြဲ လာတော့မယ်နဲ့တူတယ်။ မိန်းမကအပေါ်ကနေဆောင့်လိုးလို့ သူကအောက်ကနေ ကစ်ဆင်ဆွဲလိုက် နို့စို့လိုက်လုပ်နေလေရဲ့ဗျာ။ မိန်းမကလည်းအခုမှ အကြိုက်တွေ့နေတာနေမယ် စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကိုဆောင့်လိုးပေးနေတာ။
…..အင့်…အင့်…အားး…ရှီး…ကောင်းလိုက်တာ အကိုရယ်…ရှီးးးးးးအားးးးအမလေး လီးကြီးက နွယ့်စောက်ဖုတ်လေးထဲ ပြည့်နေတာပဲကွာ အိုးးးရှီးးးးး
သူတို့တွေလိုးနေတာကိုကြည့်ပြီးကျုပ်လည်းလီးကတအားကိုတောင်နေတော့တာဗျ။ မကြာပါဘူး မိန်းမရဲ့ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းလာပြီး နှစ်ယောက်သားပြီးသွားကြတယ်။ သုံးယောက်လုံးပင်ပန်းနေပြီလေ။ ကျုပ်တို့လင်မယားအိပ်တဲ့အခန်းထဲမှာပဲ သုံးယောက်သား အိပ်လိုက်ကြတယ်။ ကလေးကတော့ ပုခတ်ထဲမှာအိပ်လို့ပေါ့။
မနက်တော်တော်မိုးလင်းမှ ကျုပ်နိုးတယ်။ ဘေးကိုကြည့်တော့ ဟိုနှစ်ယောက်ကမရှိတော့ဘူး။ အဲဒါနဲ့ ကျုပ်လည်းမျက်နှာသစ်ပြီး မီးဖိုခန်း ထွက်လာတော့ မိန်းမကပန်းကန်ဆေးလို့ ငဖြိုးကမိန်းမရဲ့အနောက်ကနေ ပြူးထွက်နေတဲ့စောက်ဖုတ်ကို တဖုန်းဖုန်းနဲ့ဆောင့်လိုးနေတယ်။ ဒီကောင်တော်တော်ထန်တဲ့ကောင်ပဲ။ မိန်းမကလည်း အစပိုင်းတာအင်တင်တင်ရယ် အခုများ ကြတော့ သူ့စောက်ဖုတ်ထဲက ဟိုကောင်လီးကို အချွတ်မခံတော့ဘူး။ သူတို့လိုးပြီးတော့ မနက်စာစားဖို့စောင့်နေတဲ့ကျုပ်အနားရောက်ချလာ တယ်။
……အင်း…ကိုကို..ကျေနပ်ပါတယ်…နွယ်လည်းအဲဒါမျိုးမခံစားရတာကြာပြီလေ။ အဲမှာပဲ ငဖြိုး ကဝင်လာပြီး…..
…..ရပါတယ်ကွာ မင်းသာအပြင်ကို မပေါက်ကြားစေနဲ့။
……ထမင်းတော့မစားတော့ဘူး ငါ့ကောင်ရေ ထမင်းထက်အရေးကြီးတာလေးစားမယ်ကွာ…ဟီးဟီး…။
မိန်းမက ကျုပ်ကိုထမင်းပြင်ပေးနေတုန်း မိန်းမထဘီကိုလှန်ပြီး သူ့လီးကြီးနဲ့ ဆောင့်လိုး တော့တာပဲ။ မိန်းမရဲ့ ရမ္မက်ထန်သံ ညည်းသံ လေးကိုကြားနေရတယ်။ ကျုပ်မနက်စာကို အဲဒါ လေးနဲ့မြည်းတာပေါ့ဗျာ။ မိန်းမက ထမင်းထည့် ပေးပြီး ဟိုကောင့်ဘက်လှည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ စားပွဲပေါ်ထိုင်ပြီး ပေါင်ကားတယ်။ ဟိုကောင်က မိန်းမရဲ့ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်ဝလီးတေ့ပြီးဆောင့်လိုးတော့တာပဲ။
…အ…..အ….အမလေး…အိ…. အူးးးးရှီးးးးးဆောင့်ပါ ဆောင့်ပါ အားးးးရှီးးးးး။
ငဖြိုးဆောင့်ချက်တွေက စားပွဲတောင်လှုပ် တယ်။ အားပါချက်ကတော့။ ကျုပ်လည်းထမင်းစားအပြီး…သူတို့လည်းပြီးသွားကြတယ်။ ငဖြိုးကတော့နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားလေရဲ့။ မိန်းမက ပန်းကန်ဆေးကြောပြီး ကျုပ်အနားလာ ပြီး……
……အင်းပါမိန်းမရဲ့။ စောနကမိန်းမပြောတာလေ မခံစားရတာကြာပြီဆိုတော့ ကိုကို့အရင်က ရှိခဲ့ တယ်ပေါ့။ ကိုကို့ကိုပြောပြပာလားမိန်းမရယ်။
…..အော် မဆိုးပါဘူး မိန်းမရဲ့….။
……အင်းပါ ဒါဆိုပြောပြမယ်။ ကိုကို့အရင်က နွယ်လေ ရည်းစားသုံးယောက်ထားခဲ့တယ်။ အဲတုန်းက နွယ်က အရိုးခံလေ။ ပထမရည်းစားက ဇော်မျိုးတဲ့။ သူကနွယ်အပျိုရည်ကိုစဖျက်တာ။ သူနဲ့ရည်းစားဖြစ်ပြီးမကြာဘူး ပုဂံကိုသူငယ်ချင်း အတွဲတွေနဲ့ဘုရားဖူးသွားကြတာ။ ဟိုရောက်တော့ အတွဲတိုင်းက တစ်ခန်းစီယူကြတယ်။ နွယ်က မိန်းကလေးနဲ့ယောကျာ်းလေးခွဲနေရမယ်မှတ် တာ။ ဟိုရောက်မှ နှစ်ယောက်တစ်ခန်းနေရတယ်။ အခန်းထဲစဝင်တော့ လန့်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဇော်မျိုးက အခန်းထဲဝင်ဝင်ချင်း ပစ္စည်းတွေ ချရုံရှိသေးတယ် နွယ်နောက်ကရောက်လာပြီး သိုင်းဖက်တယ်။ သူ့လီးကြီးကလည်းတောင်နေ တာပဲ။ နွယ့်ဖင်ကိုလာထောက်ထားတယ်။ ပြီးတော့ နွယ့်တစ်ကိုယ်လုံးကိုနမ်းတော့ နွယ်လည်း စိတ်ထိန်းမရတော့ဘူး။ သူကနွယ့်စောက်ဖုတ်လေးကို ယတ်ပေးတော့ နွယ်ကောင်းပြီး တစ်ချီပြီးသွားတယ်။ သူလည်းအဝတ်တွေချွတ်ပြီး အရည်တွေထွက်နေတဲ့စောက်ဖုတ်ကို သူ့လီးကြီး နဲ့ တေ့ပြီး နွယ့်ကိုလိုးပါလေရော။
……အင်းကြီးတယ် ကိုဝေဖြိုးထက် ပိုတုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် မရှည်ဘူး။ အဲဒီမှာစပြီးအလိုးခံရတာပဲ။ ပုဂံမှာ နှစ်ညအိပ်သုံးရက်ဆိုတော့ နှစ်ညလုံး အလိုးခံရတယ်လေ။ သူနဲ့က မြို့ကိုပြန်ရောက် တော့လည်း သူကခေါ်ခေါ်လိုးတာ။ အကြိမ်ရေများတယ်။ သူကအခြားတစ်ယောက်ရတော့ နွယ့်ကိုဖြတ်သွားတယ်။
နောက်တစ်ယောက်က အောင်သူတဲ့။ သူက မေဂျာတူပဲ။ သူနဲ့ကသိပ်မခံဖြစ်ဘူး။ လေးငါးခါ လောက်ပဲ။ နောက်တစ်ယောက်တွဲလို့ပြတ်သွား တာပဲ။
နောက်တစ်ယောက်က လွင်မိုးတဲ့။ သူကတော့ နွယ်တို့ရွာမှာ တာဝန်ကျတယ်။ အလုပ်သင် ကျန်းမာရေးကပေါ့။ သူနဲ့စပြီး လိုးမိ တာက ရွာမှာပဲ။ နောက်တော့မြို့မှာကျောင်းတက်တော့လည်း သူမြို့ကိုရောက်လာတယ်။ ပြောင်းလာတာပေါ့။ အဲမှာပဲဆက်တွဲပြီး လိုးမိပြန်တယ်။ သူနဲ့က တည်းခိုခန်းမှာကော၊ ခြုံထဲ မှာကောလိုးဖြစိတာ။ တစ်ခါတစ်လေ ရွာကိုပြန် လိုက်ပို့ရင်း လမ်းနှာလူရှင်းတဲ့နေရာမှာပဲ ဆိုင် ကယ်ရပ်ပြီး နွယ်က ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာ ပေါင်ကား ပေးရတယ်။ သူကအောက်ကနေ မတ်တပ်ရပ်ပြီး လိုးတယ်။ သူ့လီးကလည်းကြီးတော့ကြီးတယ်။ နွယ်အလိုးခံဖူးသမျှတွေထဲမှာ ကိုဝေဖြိုးလီးက အကြီးဆုံးနဲ့ နွယ်အကြိုက်ဆုံးပဲ။
……အားးးးးငါ့မိန်းမက အတွေ့ကြုံများလှချေ လား။ ယောကျာ်းတောင် လီးတအားတောင်နေ ပြီ။ နွယ်အလိုးခံဖူးသမျှထဲမှာ ယောကျာ်းလီး အသေးဆုံးပဲပေါ့။
…….အင်း…ဟုတ်တယ်.. ဒါပေမယ့် မိန်းမက ချစ်တယ်လေ။ အဲလိုပြောပြီး ကျုပ်လီးပိုငုံ့စုပ်တော့ တာပဲ။ ခဏကြာတော့ လီးစုပ်တာရပ်ပြီး ကျုပ်လီးပေါ် စောပ်ဖုတ်တေ့ပြီး အပေါ်ကနေဆောင့် လိုးတော့တာပဲ။ ချောင်နေတာပဲဗျာ လိုးရတာ။ ခါတိုင်းထက်ပိုပြီးကိုချောင်သွားတော့တာ။ ဘာပဲဖစ်ဖြစ် ပြီးအောင်လိုးလိုက်ရတယ်။ ကျုပ်လည်း အရသာသိပ်မရသလို၊ သူလည်းလုံးဝရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။
….နွယ်ကို ဝေဖြိုးနဲ့စိတ်ကြိုက်လိုးခွင့်ပြုတယ် နော်။ နွယ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ပါ။
အဲအချိန်မှာပဲ ကလေးငိုသံကြားတော့ သူထွက်သွားတယ်။ မသွားခင်ပြောသွားသေးတယ်။ ကိုကိုလည်း အခြားမိန်းမကိုလိုးချင်ရင် လိုးနော်တဲ့။ သူ့ကိုအချစ်မလျော့ရင်ပြီးတာပဲတဲ့။ ကျုပ်လည်းစဉ်းစားတာပေါ့။ လိုးမှာလေ။ ဒီလိုနဲ့ နောက်နေ့ရောက်တော့ ကျုပ်လည်းအလုပ်သွားရ တော့မှာ ရုံးဖွင့်ပြီကိုး။ ပုံမှန်တစ်ပါတ်လုံးရုံးတက် ရုံးဆင်းလုပ်နေရတာပေါ့။ နောက်တစ်ပါတ် တနလ်ာကြတော့ ကျုပ်ရုံးသွားမလို့ပြင်တုန်းရှိသေး တယ် ဝေဖြိုးရောက်ချလာတယ်။
….ဒါဆိုလည်းကွာ ငါ့အိမ်ကနေငါရုံးပြန်ချိန်စောင့် နေပေါ့ကွာ။
….ငါလိုးမ မျက်နှာရူး…ဟျောင့်ရိုရိုသေသေတော့ သုံးနော်။
အဲဒီမှာပဲ နွယ်က ကျုပ်ကိုမနက်စာလာချတယ်။ ဟိုကောင်က အိနြေမဆယ်နိုင်ဘူး တန်း ပြီး နွယ့်နို့တွေကိုလှမ်းကိုင်တယ်။ ပြီးတော့ မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကသ်ဆင်ကြွေးတော့တာပဲ။ ကစ်ဆင်ပေးရင်း လက်တွေကလည်း အငြိမ်မနေဘူး နွယ့်အဝတ်တွေအကုန်ချွတ်ချလိုက်တယ်။ သူလည်း ချွတ်ချလိုက်တယ်။ ဘယ်တုန်းကတည်း ကလိုးချင်နေလည်းမသိဘူး လီးကတောင်မတ် နေတာပဲ။ ကစ်ဆင်ပေးရင်း နွယ့်စောက်ဖုတ်ကို နှိုက်နေလေရဲ့။ ပြီးတာနဲ့ နွယ်ကထိုင်ချလိုက်ပြီး ဒီကောင့်လီယကိုစုပ်ပေးတော့တာပဲ။ ပြီးတော့ နွယ်ကိုစားပွဲပေါ်တင်ပြီး စောက်ဖုတ်ယတ်တယ်။ နွယ့်စောက်ဖုတ်ထဲ အရည်တွေရွှဲလာတော့..လီးကြီးကိုကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်ဝကိုတေ့ချလိုက်တယ်…။
အားးး ကောင်းလိုက်တာ နွယ်လေးရယ် စောက်ဖုတ်လေးက တစ်ပါတ်ပဲမလိုးရတာတောင် စီးပိုင်နေတာပဲ။
အားးးးးးအမလေး….ကျွတ်ကျွတ် ကောင်းလိုက်တာ အကိုရယ်…နွယ့်ကို နာနာလေးဆောင့် ပေးပါ…အားလားလား သားအိမ်တောင်ထိတယ် ရှည်လိုက်တဲ့လီးကြီး….အားးးး။
ကျုပ်လည်းထမင်းစားအပြီး သးတို့လည်းတစ်ချီပြီးသွားတယ်။ ကျုပ်ကဝေဖြိုးကို ညနေ ဘီယာဆွဲခဲ့မယ်လို့ပြောပြီး ရုံးသွားဖို့ထွက်လာခဲ့ တယ်။
ကိုကိုရုံးသွားတော့နွယ်လည်း ကလေးကို နို့တိုက်ဖို့အခန်းထဲဝင်ပြီး ကိုဖြိုးကို နားရင်းစောင့် ဖို့မှာလိုက်တယ်။ ကလေးကိုနို့တိုက်သိပ်အပြီး ကျွန်မလည်းကိုဖြိုးရှိရာဧည့်ခန်းကိုထွက်လာခဲ့ တယ်။ ကျွန်မရောက်တော့ ကိုဖြိုးကဖုန်းပြော နေတယ်။ ကျွန်မထွက်လာတာကိုတွေ့တော့ ခဏနေ လာခဲ့တော့လို့ပြောပြီး ဖုန်းချလိုက်တာတွေ့ရ တယ်။ သူ့ကိစ္စရှိလို့နေမှာလို့တွေးရင်း စကား ပြောလိုက်တယ်။
…..မကြာပါဘူး နွယ်လေးရယ် ကို့ဆီကိုခဏ လာပါဦး။ လှလိုက်တာနွယ်လေးရယ်။ အဝတ်တွေကို ဝတ်မနေနဲ့ ဒီနေ့တစ်နေကုန်လိုးမယ်နော် ရှုပ်ပါတယ် ချွတ်ထားလိုက်။
ကျွန်မလည်း အဝတ်တွေချွတ်ပြီးဘေးမှာပုံ ထားလိုက်တယ်။ ကိုဖြိုးကိုကြည့်လိုက်တော့လည်း အဝတ်တွေဘယ်တုန်းကချွတ်လိုက်လည်းမသိဘူး ကျွန်မကြိုက်တဲ့လီးကြီးက တောင်မတ်နေတာပဲ။ ကျွန်မလည်း သူပေါင်ပေါ် ကိုမျက်နှာခြင်းဆိုင်တက်ထိုင်လိုက်ပြီး သူ့လီးကြီးကို ကျွန်မဖင်ကြားထဲအမြောင်းလိုက်ကပ်ထားမိတယ်။ အဲလိုကပ်ရင်း သူကကျွန်မ နှုတ်ခမ်းတွေကိုဆွဲနမ်းတော့တာပဲ။ နမ်းရင်းနဲ့ ကျွန်မဖင်ကို သူ့လက်နဲ့ဆုပ်နယ်နေတာ။ အဲလို နယ်ရင်း ကျွန်မကိုမပြီး စောက်ဖုတ်ဝကိုသူ့လီး ကြီး တေ့ချလိုက်တယ်။
လီးကြီးက ကျွန်မစောက်ဖုတ်ထဲ ငုတ်ရိုက်လိုက်သလိုပဲ တစ်ဆို့ဆို့ကြီးဝင်သွားတယ်။
ကောင်းလိုက်တာ နွယ်လေးရယ် နွယ့်စောက် ဖုတ်က ဘယ်လောက်လိုးလိုး အမြဲတမ်းဆက်လိုးနေချင်တာ။ နွယ်စောက်ဖုတ်က ကိုယ်စလိုးကတည်းက သတိထားမိတယ်။ ငလင်းလီးနဲ့ဆို အဲလိုပြဲနေမှာမဟုတ်ဘူး နွယ်အရင်က ခံဖူးတယ် နဲ့တူတယ်။
….အင်းကြိုက်တာပေါ့ ။ ကိုကို့လီးကသေးတော့အားမရဘူးလေ၊ အဲဒါကြောင့်ကိုကိုက အကိုနဲ့လိုးခိုင်းတာပေါ့။
…..အင်းပါနွယ်လေးရယ်။ နွယ်လေးအတွက် အကိုတစ်ခုစီစဉ်ထားတယ်။ ငလင်းသိလို့တော့ မဖြစ်ဘူးနော်…။
…..ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ နွယ်လေးကို အတူလိုးဖို့ပေါ့။ သူ့လီးက အကိုထက်ပိုကြီးတယ်။ နွယ်လေးကြိုက်မှာပါ။
…..ဟင်…ဒါတော့အဆင်မပြေဘူးလေ အကိုရယ် နွယ်က ကိုကို့အပေါ်သစ္စာမဲ့သလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့။
….မဖြစ်ပါဘူး နွယ်လေးရဲ့ ဒီတစ်ခါပဲ နွယ်လေးခံ ကြည့်ပါ။ မကြိုက်ရင် နောက်မလုပ်တော့ဘူးလေ။ ဒီတစ်ခါမှနွယ်လေး လက်မခံရင် အကိုလည်းနောက်မလာတော့ဘူးကွာ။
ကျွန်မလည်းစဉ်းစားရပြန်ပြီ။ ကျွန်မဒီလီး ကြီးကိုစွဲလမ်းနေပြီလေ။ သူသာမလာရင် ကျွန်မ ငတ်ပြီပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ဒီတစ်ခါခံပြီးရင်တော်ပြီပေါ့။ နောက်မကြိုက်ဖူးလို့ပြောရင်ရတယ်လေ။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်မလည်းလက်ခံလိုက်တယ်။
…..အင်းပါ အဲဒါဆိုလည်း တစ်ခါပဲနော်။ ကိုကိုမသိစေနဲ့နော်။
….အငပါနွယ်လေးရဲ့ အဲဒါဆိုအကိုခေါ်လိုက်မယ် နော်…။
သူက အပြင်ကို ဝင်ခဲ့တော့လို့လှမ်းခေါ်ရင်း ကျွန်မကို ခပ်မြန်မြန်လေးဆောင့်လိုးနေတာ။ အဲ ဒီမှာပဲ လာပါပြီဗျာ…ဆိုပြီး တစ်ယောက်ဝင်လာ တယ်။ ကျွန်မကြည့်လိုက်တော့အံသြသွားတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ ကုလားကြီးတစ်ယောက်ဝင်လာ တာကိုး။ သူက ဝင်လာလာခြင်း ကိုဖြိုးပေါ်ထိုင် ပြီးဆောင့်ချနေတဲ့ ကျွန်မရဲ့နောက်ကနေ နိူ့တွေကိုလာဆွဲနေတယ်။ ကိုဖြိုးက…..
…….ကဲ…ကုလားကြီး မင်းပညာပြပေးလိုက်ကွာ မင်းမကောင်းရင်ဒီတစ်ခါပဲရမှာနော် မင်းကောင်း အောင်လိုးရင်တော့ နောက်ဆက်တွဲရမယ်…။
…..စိတ်ချပါကွ သူကြိုက်သွားစေရမယ်..မင်းသာ မြန်မြန်လိုး ပြီးရင်ငါလိုးတော့မယ်။
……အေးပါအေးပါ…။ ကိုဖြိုးကပြောရင်းနဲ့ ကျွန် မကိုအဆက်မပြတ်ဆောင့်လိုးတာ အချက်နှစ် ဆယ်လောက်ဆောင့်အပြီး ကျွန်မလည်းပြီးသွား တော့တယ်။ ပြီးသွားတော့ ကိုဖြိုးက ကျွန်မကို ရေသွားဆေးခိုင်းလို့ ကျွန်မလည်းစောက်ဖုတ်ကို ရေသွားဆေးလိုက်တယ်။ ရေဆေးပြီးတော့ သူတို့နားပြန်ရောက်တော့ ကုလားကြီးက ကျွန်မကို နမ်းပါလေရော။ နမ်းရင်းနဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို လည်း သူ့လက်ညှိးနဲ့မွှေးပေးနေတာ။ မွှေပေးပြီး တော့ ကျွမ်မကို ထိုင်ခုံပေါမှာလေးဘက်ကုန်းခိုင်း တယ်။ လေးဘက်ကုန်းတော့ သူကဖင်ဝကိုယတ် ပေးတယ်။ ဖင်ကိုယတ်ရင်းစောက်ဖုတ်ကိုကလိ နေတော့ကျွန်မမှာအကောင်းကြီးကောင်းနေတာပဲ ရှင်။ ပြီးလည်းပြီးရော ကြမ်းပြင်ပေါ်လှဲအိပ်ခိုင်း တယ်။ ကျွန်မလည်း ကြမ်းပြင်ပေါ်လှဲအိပ်အပြီး သူက သူ့အဝတ်တွေချွတ်ချတယ်။ ပုဆိုးကိုချွတ် ချလိုက်တော့ ပေါ်လာတဲ့လီးကြီးကိုကြည့်ပြီး ကျွန်မ လန့်သွားတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ နီဂတိုး ကားတွေထဲကလို လီးကြက မည်းပြောင်ပြီး အရှည်က ကိုးလက်မနီးပါးရှည်ပြီးတော်တော်တုတ်တယ်ရှင့်။ ကျွန်မကိုဖြိုးဘက်လှည့်ပြီး..
ကုလားကြီးက သူ့လီးကြီးကိုင်ပြီး ကျွန်မ စောက်ဖုတ်ကိုတေ့လိုက်တော့ ကြက်သီးတွေပါ ထသွားတယ်။
လီးကြီးကဖြေးဖြေးခြင်း ကျွန်မစောက် ဖုတ်ထဲ ဝင်လာတယ်။
လီးကြီးတဆုံးဝင်တော့ ကျွန်မမှာ အသက်ရှု တောင်မမှန်ချင်ဘူး..။ သူကတော့ အဆုံးထိ ဂရုတ စိုက်သွင်းတယ်။ ကြည့်ရတာ ပရိုတစ်ယောက် နဲ့တူတယ်။ လီးတဆုံးဝက်တော့ မလိုးသေးဘဲ ကစ်ဆင်ဆွဲလိုက်၊ နို့စို့လိုက်လုပ်နေတော့ ကျွန်မ လည်း ဖီးတက်ပြီး မြန်မြန်လိုးပေးပ်ါတော့ပြော ယူရတယ်။
….လီးကြီးကို​ဖြေးဖြေးခြင်း အထုတ်အသွင်းလုပ် ရင်း ကုလားကြီးက ခံနိုင်ပြီလားမေးတော့ ကျွန်မ ခေါင်းညိတ်ပြမိတယ်။
အား….ရှီး……အားးးး ကြီးလိုက်တာ လူလီးမှ ဟုတ်ရဲ့လား ကုလားကြီးရယ်။
…..လူလီးပါ အမရဲ့ ကောင်းတယ်မို့လား…ကြပ်နေတာပဲ စောက်ဖုတ်လေးက။
ကုလားကြီးကလည်း ကျွန်မကိုအားရပါးရ ဆောင့်လိုးနေတာ။ ကျွန်မလည်းတစ်ချီပြီးလို့ သူမပြီးသေးဘူး။ နောက်တစ်ချီပြီးမှ သူ့လီး ရည်တွေ ကျွန်မစောက်ဖုတ်ထဲ အကုန်ပန်းထဲ့လိုက်တယ်။ ကျွန်မလည်းလုံးဝကြိုက်သွားတာ။
….ဘယ်နှယ့်လည်းနွယ်….ကြိုက်ရဲ့လားတဲ့…ကိုဖြိုးကမေးတော့ ကျွန်မလည်းအကောင်းကြီးကောင်းပြီး မောနေတော့ ခေါင်းပဲညိတ်ပြလိုက် တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်က ကျွန်မကိုတစ်နာရီ လောက်အနားပေးတယ်။ တစ်နာရီလောက်ကြာ တော့ ကုလားကြီးကပက်လက်လှန်ထားတယ်။ သူ့အပေါ်ကနေဆောင့်ခိုင်းတာပေါ့။ ကျွန်မသူ့လီး ကြီးပေါ်ဆောင့်လိုးနေတုန်း ကိုဖြိုးက ကျွန်မဖင်ကို ဂျယ်လိမ်းပြီး ဖင်ထဲသူ့လီးကြီးထည့်တယ်။ အဲပုံစံနဲ့ ကျွန်မအပေါက်နှစ်ပေါက်လုံး အလိုးခံရ တော့တာပဲ။ ကျွန်မလည်းအကြိုက်ကြီးကြိုက် သွားတယ်။ ကိုကိုရုံးမဆင်းခင်အထိ နှစ်ယောက် သားကျွန်မကိုဝိုင်းလိုးကြတာ။ ကိုကိုရုံးဆင်းတော့ ကုလားကြီးကပြန်သွားတယ်။ ကိုကိုပြန် ရောက်တော့ ကိုဖြိုးက ကျွန်မဖင်ကိုလိုးနေတုန်း ပဲ။ ကျွန်မလည်း လီးနှစ်ချောင်းနဲ့ ကိုယ်တုံးလုံး တစ်နေကုန်နေထဲ့ရတော့ လူလည်းပြိုင်းသွား တယ်။ ကိုကိုကလိုးတော့စောက်ဖုတ်က ကျယ် နေပြီလေ။ ကိုကို့ကိုပြီးအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါ တယ်။ ညကြတော့ သူတို့နှစ်ယောက်သောက်စား ရင်း ကိုဖြိုးက သောက်ဝိုင်းမှာတင်ခေါ်လိုးတာ။ နောက်နေ့တွေကြတော့လည်း ကိုကိုရုံးသွားရင် ကိုဖြိုးနဲ့ကုလားကြီးလာလိုးတယ်။ ကိုဖြိုးမလာ ရင်ကုလားကြီးကလာလိုးတယ်။ ကုလားကြီးလီး ကိုလည်းကျွန်မတော်တော်စွဲသွားတာပေါ့ရှင်….။